News - Fiber Glass Mesh Market 2021 Falanqaynta Kobaca ee Wadammada ugu sareeya Xogta, Isbeddellada Warshadaha, Dakhliga Iibka, Cabirka Suuqa ee Saadaasha Gobollada illaa 2024 oo leh Heer Kobcaan oo Cajiiba
Fiber Glass Mesh Market 2021 Falanqaynta Kobaca ee Wadamada Sare ee Xogta, Isbeddellada Warshadaha, Dakhliga Iibka, Xajmiga Suuqa ee Saadaasha Gobolka illaa 2024 oo leh Heer Kobcin Muuqda
Faahfaahin Gaaban oo Ku Saabsan Suuqa Mesh Fiber Glass: Fiberglass mesh waa si quruxsan loo tolay, oo loo yaqaan 'skissross cross' oo ah muraayada loo yaqaan 'fiberglass' oo loo isticmaalo in lagu abuuro alaab cusub sida cajalad iyo miirayaal Markii loo adeegsado miiraa ahaan, maahan wax cusub in soo-saaruhu uu buufiyo dahaadhka PVC si uu u noqdo mid xoog badan oo sii dheeraada.
Diisambar 15, 2020 (The Expresswire) - Global "Fiber Glass Mesh Market" 2021-2024 Warbixinta Cilmi-baarista waxay siineysaa falanqeyn muhiim ah xaaladda suuqa ee soosaarayaasha Fiber Glass Mesh oo leh xaqiiqooyinka iyo tirooyinka ugu fiican, macnaha, qeexidda, Falanqaynta SWOT, fikradaha khibradda horumarkii ugu dambeeyay ee adduunka. Warbixinta ayaa sidoo kale xisaabisa cabirka suuqa, Fiber Glass Mesh Sales, Price, Revenue, Gross Margin iyo Market Share, qaab dhismeedka qiimaha iyo heerka koritaanka. Warbixintu waxay tixgelineysaa dakhliga ka soo baxay iibinta Warbixintan iyo teknoolojiyada ee qaybaha kala duwan ee codsiyada iyo Baadhitaannada Xogta Suuqyada iyo Jaantusyada ku faafay 117 Bog iyo qoto dheer TOC ee Suuqa Fiber Glass Mesh.
COVID-19 wuxuu saameyn ku yeelan karaa dhaqaalaha adduunka sedex dariiqo oo waaweyn: isagoo si toos ah u saameynaya wax soo saarka iyo baahida, iyadoo abuureysa silsilad sahay iyo carqaladeyn suuqa ah, iyo saameyntiisa maaliyadeed ee shirkadaha iyo suuqyada maaliyadeed.
Warbixinta kama dambaysta ah ayaa ku dari doonta falanqaynta saameynta COVID-19 ee warshadan.
SI AAD U FAHMATO SIDEE UU LOOGA QAARSAN YAHAY SHARCIYADA-19 SAAMEYNTA WUXUFADAN - TUSAALAHA CODSIGA
Ujeeddada daraasaddu waa in la qeexo cabirka suuqyada ee qaybaha kala duwan iyo waddammadii sannadihii la soo dhaafay iyo in la saadaaliyo qiyamka Shanta sano ee soo socota. Warbixinta waxaa loogu talagalay in lagu daro labadaba tayada tayada iyo tirada warshadaha iyadoo la tixgelinayo mid kasta oo ka mid ah gobollada iyo waddamada ku lug leh daraasadda. Intaa waxaa sii dheer, warbixinta ayaa sidoo kale haysa macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan dhinacyada muhiimka ah sida darawallada iyo waxyaabaha xakameynaya kuwaas oo qeexi doona kobaca mustaqbalka ee suuqa Fiber Glass Mesh.
Baaxadda Suuqa Fiber Glass Mesh:
Sannadkii 2010, GlassFibreEurope waxay ku eedeysay shirkadaha Shiinaha ee Chongqing Polycomp International Corp., Jushi Group iyo New Changhai Group inay ku daadiyeen suuqyada Yurub sanadihii la soo dhaafay tiro aad u tiro badan, oo si aan caddaalad ahayn looga gooyay muraayadaha fiberglass-ka, xargaha la jarjaray, deyrarka iyo dermaha. Isla mar ahaantaana, Midowga Yurub wuxuu bilaabayaa baaritaanka ka-hortagga daadinta dharka mesh fiber mesh asalkiisu yahay Shiinaha. Ganacsatada waaweyn ee dhoofiya Fiber Glass Mesh sida Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd, Grand Composite, Jiangsu Tianyu Fiber Co. Ltd ayaa ku lug lahaa. Dhacdadani waxay dhirbaaxo culus ku dhufatay warshadaha mesh fiber-ka mesh.
Shan sano ka dib, Wadashaqeynta firfircoon ee Shiinaha Glass Fiber Industry Association, Shiinaha Composites Industry Association, Ningbo City Council, shirkadaha Ningbo fiber fiber waxay ku casuuntay Jiangsu, Shandong iyo meelo kale 16 shirkado waaweyn oo dhalo ah ayaa u yimid Ningbo, EU muraayadda fiber fiber grid Fabric baaritaanka dib u eegista kiisaska ka hortagga daadinta daadinta ee arrinta si loo gaaro is afgarad.
Sababtoo ah marinka helitaanka warshadaha oo hooseeya, waxaa jira soo saarayaal badan oo ku kala yaal Shandong, Hebei, Zhejiang, Jiangsu iyo meelo kale oo Shiinaha ah oo leh awood ballaaran iyo qiimo aad u jaban. Waxay soo saaraan tayo liidata oo ah mesh fiber galaas, dhacdadani waxay carqaladeyneysaa horumarka caafimaadka ee warshadaha, ka dib dhowrkii sano ee la soo dhaafay ee muddada adag, iyo warshadaha Shiinaha ayaa keenaya xaalad tartan oo nidaamsan.
Suuqa adduunka ee loo yaqaan 'Fiber Glass Mesh' ayaa la filayaa inuu ku koro CAGR oo qiyaastii ah 3.4% shanta sano ee soo socota, wuxuu gaari doonaa 571.6 milyan oo doolar sanadka 2024, laga bilaabo 482.6 milyan oo doolar sanadka 2019, sida lagu sheegay daraasad cilmi baaris oo cusub.
Warbixintani waxay diiradda saaraysaa Mesh Fiber Glass Mesh ee suuqyada adduunka, gaar ahaan Waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Aasiya-Baasifigga, Koonfurta Ameerika, Bariga Dhexe iyo Afrika. Warbixintani waxay u kala saartaa suuqa iyadoo lagu saleynayo soosaarayaasha, gobollada, nooca iyo dalabka.
Soo qaado Nuqul Nuqul ah Warbixinta suuqa Fiber Glass Mesh 2020
Ka warbixi daraasad dheeri ah heerka horumarka suuqa iyo isbeddelka mustaqbalka Fiber Glass Mesh Market adduunka oo dhan. Sidoo kale, waxay u kala jajabisaa Fiber Glass Mesh suuqyada Qaybaha iyo Codsiyada si buuxda oo qoto dheer u baaraan una muujiyo astaanta suuqa iyo rajooyinka.
Kala soocida waaweyn waa sida soo socota:
● Qaar kale
Codsiyada waaweyn waa sida soo socota:
Ulation Kuleylka darbiga dibadda
● Dhisidda biyo xireenka
Juquraafi ahaan, warbixintan waxaa loo qaybiyay dhowr gobol oo muhiim ah, oo leh iib, dakhli, saamiga suuqa iyo koritaanka Heerka Fiber Glass Mesh ee gobolladan, laga soo bilaabo 2014 ilaa 2024, oo daboolaya
Waqooyiga Ameerika (Mareykanka, Kanada iyo Mexico)
● Yurub (Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Ruushka iyo Turkiga iwm)
● Aasiya-Baasifiga (Shiinaha, Jabbaan, Kuuriya, Hindiya, Ustaraaliya, Indooniisiya, Taayland, Filibiin, Maleesiya iyo Fiyetnaam)
America Koonfurta Ameerika (Brazil, Argentina, Columbia iwm)
Bariga Dhexe iyo Afrika (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria iyo South Africa)
Warbixintan Cilmi baarista / Falanqaynta Suuqa Fiber Glass Mesh waxay ka kooban tahay jawaabo su'aalahaaga soo socda